किन फ्याकिदैछन् शिशुहरु ? खै उनीहरुको मातृत्व ! [दर्दनाक फोटोकथा] जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
किन फ्याकिदैछन् शिशुहरु ? खै उनीहरुको मातृत्व ! [दर्दनाक फोटोकथा]
इन्द्र आचार्य/काठमाडौ । आज तपाई पाठकलाई यस्ता तस्वीर देखाउदै छौ जसले तपाईको ह्दय रसाउने छ । यो काठमाडौको नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठन ( केन्द्रिय बाल मन्दिर) भित्रका यी शिशुहरुलाई हेर्दा लाग्छ लोकमा लोकाचार हराईसकेको छ । आफ्नै कोखलाई कुकर्मले घेरेपछि यी अबोध शिशुहरु गर्भबाट पैदा हुँनासाथ धर्ती नै टेक्न नपाई मिल्काइएको छ । हाम्रो समाजमा यस्तापनि नारी–पुरुष छन् की, जसले आफ्नै सन्तान धर्तिमा पाईला नटेक्दै फ्यालिदिन्छन् । कहिले प्रशुति गृहको शौचालयमा, कहिले नदी, खोला, खोल्सा र नहरको डीलमा फालिएको अवस्थामा यस्ता अवोध शिशुहरु भेटिन्छन् । जहाँ नवजात शिशु एक सेकेण्डपनि बाच्न सक्दैनन्, घना जंगल र झाडि जहाँ जंगली जीव–जन्तुको आक्रमण हुन्छ, त्यहाँ भेटिन्छन् यस्ता शिशुहरु, यो कुकर्मलाई छोपेर सृष्टिलाई बचाउनका लागि यो बाल मन्दिर हरदम सक्रिय छ । त्यसैले नाम नै काफि छ, बाल मान्दिर यानिकी, भगवान रुपी शिशुहरु संरक्षित हुने मन्दिर, तपाईले तस्वीरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जन्मिने वित्तिकै शालनाल र रछान सहितै फालेर आमा बाबु वेपत्ता भएपछिका यी अवोध शिशुहरुपनि हुुर्कीरहेका छन् ।
नेपाल बाल संगठन ( बाल मन्दिर ) ले सञ्चालन गरेको बाल गृह व्व्यवस्थापन प्रमुख सविता लम्सालका आँखा रसाउदै थिए, उनै शिशुलाई खेलाउदै उनले भनिन् यहाँ कुनै जन्मिने वित्तिकैका त कोही जन्माएर केही दिन पालिसकेका शिशु नालिमा फालेको अवस्थामा भेटेर ल्याएका हुन् । नजिकै रहेकी १ महिना ७ दिनकी शिशुलाई देखाउदै उनले भनिन् यीनी त प्रशुती गृह थापाथलीको शौचालयमा फालिएकी थिइनृ ।
बच्चा जन्माउन अस्पताल प्रवेश गर्दै गर्दा छोरी जन्मिएपछि शौचालयमै छोडेर बाबु–आमा फरार भएको पहरीको अनुशन्धानले देखाएको छ । प्रहरीका अनशार छोराको आशमा गएका ति दम्पतीको छोरी जन्मिएपछि अस्पतालमै छोडेर भागेको हुनसक्छ । पछिल्लो ८ बर्ष बाल मन्दिरमा ल्याइएका शिशुहरुको स्याहार–सुसार गर्न बाल गृहमै बस्दै आएकी ओखलढुंगाकी ६८ बर्षीय सावित्रा पोखरेल भावुक हुँदै भनिन जीवित भगवान जस्ता शिशु फाल्ने तिनीहरुका त सात जुनी नै सन्तान नहुन । जस्तोसुकै बाध्यता भएपनि आमाले आफ्नो सन्तान फाल्नु भनेको कुकर्मले कुत्कुत्याएको हो पोखरेलको बुझाई छ ।
केही महिना पहिले एक आमाले छोरी जन्मिएपछि प्रशुती गृह थापथली कै शैयामा शिशुलाई छोडेर वेपत्ता भएकी थिइन् । उनै भगवान रुपी शिशुपनि आज यही रहेका आमाहरुको मातृत्वमा हुर्किरहेकी छन् । यी तस्वीर र घटना त हाम्रो समाजका प्रतिनिधि मात्र हुन् । यहाँ अवैध गर्भका शिशु मात्र फालिदैन, वैधानिक रुपमा आमाबाबुबाट जन्मिएका शिशुपनि फालिन बाध्य छन् । लैङ्गिक विभेद, सामाजिक मर्यादाको पाठ पढाउन अर्बो डलर खर्च गर्ने ती डलरको खेती गर्ने संघ संगठन र संस्थाहरुलाई यस्ता तस्वीरहरुले सायद गिज्याइरहेको हुनसक्छ । कीनकी यो बालमन्दिरमा त्यस्ता शिशुहरु छन्, जो भ्रुणमा छोरीको लिङ्ग लिएर जन्मिएकै कारण धर्र्ती टेक्नै नपाई आमाको कोखबाट बाहिर निस्किएकै दिन फालिन बाध्य भएका छन् । माया–पिरती र हाँसखेलमै गर्भ रहेपछि समाजको लोकाचार बचाउन अर्थात समाजको घेरा तोड्न नसकेकै कारण पनि आफ्नो कोखको एक अंश चटक्कै फालेर भाग्न हाम्रै समाजका नारी–पुरुष बाध्यछन् ।
खै त उनीहरुले नागरिक सचेतनामा गरिएको खर्बो रुपैया खर्चको नतिजा ? यो प्रश्न सिंहदरबारमा विराजमान भएका सरकारका ती प्रतिनिधिलाई किनकी आज यस्ता तस्वीरले उनीहरुलाई पनि गिज्याउने छ, यी अवोध शिशुलाई संरक्षण र भोलीको उज्वल भविष्य सम्म ठो¥याउने जिम्मेवारी उनैको हुने हो । तर आज अन्य बालगृहको त कुरै नगरौ सरकारी स्वामित्वमा रहेका बालगृहमा समेत राज्यले नियमित बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विश्व समुदायमा अनुशरण गरिएको बाल अधिकार सम्बन्धि विभिन्न महासन्धिमा सरकारी प्रतिनिधिहरु हस्ताक्षर गर्न हतारिन्छन् तर शिशुको संरक्षणमा कुनै दिगो आधार छैन । तसर्थ यी तस्वीरले राज्यका प्रतिनिधिलाई खर्बदारी गर्छ की बालअधिकार र बाल–संरक्षणको विषयलाई राज्यले पहिलो प्रथामिकता बनाओस् । अनि हामि स्मरण गराछौ ती पुरुष र नारीहरुलाई, जसलाई कुकर्मले घेरेर आफ्नै कोख रित्याइरहेका छन् । सर्वश्रेष्ठ प्राणीको कोखमा जन्मलिएका ती नर–नारीहरु हो, जो आफ्नै सन्तानलाई फाल्दै छौ या फालेका छौ भने, सामान्य सचेतना भएका पशुहरुले समेत आफ्ना सन्तानलाई संरक्षण गरेको दृष्य सम्झ जसले तिमिहरुलाई ती पशुभन्दापनि तल झारिरहेको छ ।
अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोग बन्न जरुरी
नेपाल बाल संठन अर्थात् बालमन्दिर आज ती कुकर्मले घेरिएका मानवहरुले फालिएका शिशुहरुको संरक्षण मात्र गर्दै छैन । अभिभावक विहीन अवस्थामा सडकमा भौतारीएका बालबालिकालाई संरक्षण मात्रै दिदै छैनन् । मानव सृष्टिलाई धान्ने एक अंग पनि बन्दैछ । नेपालको भोलीको भविष्य उज्वल बनाउने एउटा केन्द्रविन्दु समेत बनिरहेको छ । आज बालबालिका कुलत, गलत मार्गमा गएभने राज्यको भविष्य नै डामाडोल हुन्छ । त्यही भएर बालबालिका भोलीको देशका कर्णधार हुन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले शिशु देखि बालपन सम्म किशोरदेखि बयस्कहरु सम्मको भविष्यको बाटो डो¥याएर बालमन्दिरले राज्यको भविष्य सुरक्षित गरिरहेको छ । यहाँ जन्मिएकै दिन देखि बयस्क बालबालिकाहरुले पनि संरक्षणका साथै पालन पोषण एवं शिक्षादिक्षा र सिप पाइरहेका छन् । राज्यले पहिलो प्रथामिकतामा नराखेपनि बालमन्दिरको व्यवस्थापनको सक्रियताले उच्च कोटीको संरक्षण एवं शिक्षा पाइरहेका छन् । नेपाल बाल संगठनका उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ दावी गर्छन् आज बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार संरक्षणमा नेपाल बाल मन्दिर नै उच्च कोटीको सावित भएको छ ।
राज्यले नियमित बजेटको व्यवस्था नगरेपनि हिजो बालमन्दिरमा रहेका बालबालिका खान, लाउन नपाएरै कुपोषणको शिकार बनिरहेका छन् भन्ने सन्देशलाई अहिलेको संगठनको टीमले परिवर्तन गराएको उनको दावी छ । नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) केन्द्रीय कमिटी र यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको सक्रियता कै कारण विगतमा बच्चाका लागि पोषण, स्याहार–सुसार एवं शिक्षाका लागि भइरहेको अभाव टारेको छ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । हिजो दुई बर्ष सम्म तलब नै नपाएका कर्मचारीहरुलेपनि तलब पाउन थालेका छन् तर यो अवस्था ल्याउने भनेको सरकार नै हो, बालअधिकारको सुनिश्चित गर्ने गराउने पहिलो कर्तव्य भएको सरकारले नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बाल गृहलाई नियमित बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्नु ठुलो कमजोरी रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाई छ ।
जसले देशकै भविष्य सुरक्षा गरेको छ । बालमन्दिर अन्र्तगतका देशैभरीका १० वटा बालगृहमा वेसाहारा शिशु तथा बालबालिकाहरुले आफ्नो भविष्य कोरिरहेका छन् । उसैलाई बजेटको व्यवस्था नहुनु राज्यकै कमजोरी हो, सुन्दै लाजमर्दो छ श्रेष्ठले भने । यहाँ हुर्किएका बालबालिकाहरुको अभिभावक भनेकै बालमन्दिर हो, यही संगठनका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरु उनीहरुका आमाबुबा र आफन्तजन हुन् । तसर्थ उनीहरुको परिचय, धर्म–कर्म संस्कार संस्कृतिका साथै भविष्यभरी साथ सहयोग गर्ने निकाय नै यही हो । हामिले यही भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छौ । बालमन्दिरका निर्देशक रमेश भूमीले जानकारी दिए । नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुनेछ ।
असहाय, अनाथ, सुस्तमनस्थिती, द्धन्दपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक छ भनी उल्लेख गरिएको छ । तरपनि त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । बालबालिका अभिवाकहीन अवस्थामा सडकमा नै भौतारिरहेका छन्, सडकमै बाँचिरहेका छन् तर राज्य बेखबर छ । बनेका नीतिनियम पनि की त अपुरा छन् की त कागजको पानमा मात्र सिमित छन् । बर्षमा एकपटक बाल दिवसको दिन बाल अधिकारको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, ३६५ दिन नै बालबालिकाको हक अधिकार र संरक्षणमा लागेमात्र बाल अधिकारको संरक्षणमा मद्वत पुग्छ । देशमा गणतन्त्रको स्थापनापछि विभिन्न वर्ग लिङ्ग र समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न आयोगहरु बने तर देशकै कर्णधार बालबालिकाको अधिकारको निम्ति राज्यले सोचेको खै ? उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न छ । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका बर्ग र जातको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले संवैधानिक आयोग नै बनाएको छ तर बालबालिकाको अधिकारका लागि खै बन्यो आयोग, कहाँ छ राज्यको निकाय तसर्थ बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न बाल अधिकार राष्ट्रिय आयोगको आवश्यकता देख्छन् उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ।
के बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य चिन्तित बन्नु पर्दैन । राज्यको पहिलो दायीत्व हैन । यो तर्फ खर्बदारी गर्नुपनि सबैको कर्तव्य ठहर्छ ।
अब भगवान महावीर जैनसँग नेपालको बाल अधिकार जोडिदै
भगवना महावीर र नेपालका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण अभियानसँगै जोडिए अघि बढ्ने भएको छ । दुईसय बर्ष पहिले बनेको नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को भवनमा नै आउँदो बैशाखमा भगवान महावीरका जीवित ११ औ आचार्य आएर बस्ने इच्छा देखाएपछि नेपालको बाल अधिकारले पनि फड्को मार्ने आँकलन गरिएको छ । भगवान महावीरका जीवित ११ औ आचार्य आगमनलाई लक्षित गरी बालमन्दिर रहेको भवनपनि सिँगार पटार र रंग–रोगन गरिदैछ । जैन धर्मका अनुयायीहरुले यसको स्वरुप परिवर्तन गराउदैछन् । भगवान महावीरका जीवित ११ औ आचार्य आगमनसँगै नेपालका बालबालिकाको अवस्था र अधिकार संरक्षणको मुद्धा विश्वभर चर्चा गरिने भएकाले अब बालअधिकारले फड्को मार्न सक्ने नेपाल बाल संगठनका महासचिव सुवास पोखरेलले जानकारी दिए ।
जैन धर्मले आफ्नो इतिहास छैठौ सताब्दिदेखिनै बोकी आएका्े छ । नैन धर्मालम्वीहरुको विश्वास अनुसार छैठौ सताब्दीमा २४ वटा गुरुहरु थिए । जिन्लाई तिर्थनकरास मान्छे भनिन्थ्यो र महावीर जैन अन्तिम गुरु भनेर चिनिन्छ । जैन धर्मका संस्थापक महावीर जैनलाई मानिन्थ्यो । यी गुरुहरु जिउदै मोक्ष प्राप्त गरेको विश्वास गरिन्छ । जिउदो मोक्ष प्राप्त भगवान महावीरका जीवित ११ औ आचार्य आँउदो बैशाखमा नेपाल आउदै हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालको बालमन्दिरमा आफु केही दिन बस्ने इच्छा राखेपछि अहिले जैन धर्मका प्रवर्तकहरुले यसको सिँगार पटार गरिरहेका छन् । अहिंसाका पुजारी भगवान महाविरको आगमनले बाल अधिकारको संरक्षणको मुद्धापनि अब सँगै अघि बढ्ने जैन धर्मका अनुयायी दिलिप जैनको विश्वास छ ।